Global Voices teny Malagasy » Netizen Report: Eken’ireo Olom-pirenena Soisa Ny Fanarahamaso · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Oktobra 2016 15:37 GMT 1	 · Mpanoratra Netizen Report Team Nandika Tantely
Sokajy: Soisa, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Taminà fitsapankevi-bahoaka natao ny 25 Septambra, nanohana lalàna vaovao  izay hanome alalana ny sampam-pitsikilovana Soisa (Sampana Mpanangom-baovaon'ny Kaonfederasiôna, na SRC), ny maro an'isa tamin'ireo Soisa mpifidy, mba hitsikilo amin'ireo fifandraisan-davitra , hampiditra ireo fitaovam-panarahamaso fitsikilovana an'ireo fitaovana fifandraisandavitr'ireo olom-pirenena, ary hametraka fitaovam-pihenoana bitika sy fakàna lahatsary any amin'ireo toerana manokana.
Manitatra ny fahafahan'ny governemanta Soisa amin'ny fanarahamaso io lalàna io, saingy mbola mitaky ny hanànan'ireo tomponandraiki-panjakana amin'ny fitsikilovana ny fahazoandàlana avy amin'ny fitsaràna federaly, ny minisitry ny fiarovana ary ny kabinetra mba ho afaka manara-maso olom-pirenena iray. Natao io dingana io mba hizaràna fahefana ary mba hahatonga ilay lalàna tsy hahazoana manao fanararaotam-pahefana, farahafakeliny amin'ny teôria. Amin'ireo tranga maika anefa, afaka alaina aty aoriana ireo fahazoandàlana ireo. Hampahafantarina  ao anatn'ny iray volana ireo fomba sy ny faharetan'ny fanarahamaso ihany koa ireo olom-pirenena kinendry amin'izany, na misy aza ireo maningana raha toa manohintohina ny tombotsoam-bahoaka, hisy fiantraikany amin'ireo dingana araka ny lalàna, na mety hampidi-doza olona, ny fampahafantarana ilay ahiahiana.
Nitatitra ny AFP  fa toy ny fitenenana ankolaka ny “fialàna avy ao anaty lakavy ary fiakarana amin'ny ambany rihan'ny” fenitr'ireo sampan-draharaham-piarovana iraisam-pirenena, no fahitàn'i Guy Parmelin, minisitry ny fiarovana Soisa, ny fanekena ilay lalàna.
Naneho ahiahy  ilay parlemantera sosialy-demokraty, Jean Christophe Schwaab, mpitarika mafàna fo ny fanoherana ilay volavolan-dalàna, hoe mety handingana ireo zotra fakàna fahazoandàlana ara-pitsaràna sy ny ara-piarovana ny governemanta ankehitriny. Nilaza ihany koa izy fa manahy amin'ny mety hahalasa baranahiny ny fanarahamaso io ato anatin'ireo taona ho avy, sady nomarihany ny fahasarotan'ny fandavana tranga maika avy amin'ny sampam-pitsikilovana “amin'izao fiarahamonina be fanahiana loatra amin'ny ankapobeny ankehitriny izao.”
Mampisy ahiahy an'ireo kaompanianà teknolojia mitoetra any Soisa ihany koa ilay lalàna, tafiditra amin'izany ny ProtonMail, mpamatsy tolotra imailaka tsy azo vakiana, izay malaza sady fantatra amin'ny fanatonany ny mpampiasa. Naneho hadisoam-panantenana tamin'ny valin'ilay fitsapankevi-bahoaka ny mpanorina ny ProtonMail, Andy Yen, tao aminà tafatafa niaraka tamin'ny TechCrunch , saingy nanamafy izy fa “tsy hisy vokany amin'ny ProtonMail” ilay lalàna, noho ny antony hoe ny orinasa dia tsy manangona na mitahiry ireo fanalahidin'ny imailak'ireo mpampiasa (izay tsy maintsy ananana mba ahafahana mamaha sy mamaky ny votoatin'ilay hafatra imailaka) na ireo loharanom-baovao manokana azo amantarana ny tsirairay.
Nanamarina  vao hiangana ny gazetim-baovao Meksikana, Reforma; fa nahazo rindrambaiko fanarahamaso avy tany amin'ny orinasa Israeliana NSO Group ny lehiben'ny fampanoavana  ao Meksiko, ny taona 2014 sy 2015, izay nitentina 15 tapitrisa dolara. Manampy ireo lisitra mitombo hatrany amin'ny fanjifàna goavana  izay nataon'ireo mosoivohon'ny governemanta Meksikana tamin'ireo orinasanà sangany amin'ny fanamboarana rindrambaiko, tato anatin'ny efatra taona, izany. Namboraka ihany koa ireo antonta-taratasy niporitsaka sy ireo fanadihadiana ara-tekinika fa ireo manampahefana dia nampiasa ny rindrambaiko Finfisher an'ny Gamma, Rafitra Fanarahamaso avy Lavitra an'ny Ekipa Mpijirika, ary ilay antsoina hoe mpisambotra IMSI  namboarin'ny Exfo Oy, orinasanà teknolojia Finlande.
Notifirina ho faty  ny 25 Septambra, teny ivelan'ny efitry ny fitsaràna tao Amman, izay tokony nitsaràna azy noho ny sarisary nolazaina ho manohina ny Silamo, nalefany tamin'ny Facebook, ilay Jordaniana mpanoratra Nahed Hattar. Nampangaina tamin'ny “fihantsiana fankahalàna sekta ary manala baraka ny Silamo” i Hattar, hoy ny Guardian. Nampiseho lehilahy be volombava, mety hoe milisy ISIS, mitsotra eo am-pandriana eo anilanà vehivavy roa, mangataka an'Andriamanitra hitondra rano ho azy, ilay sariitatra. Na voasambotra aza ilay mpitifitra, niantso ny governemanta hisambotra ireo tomponandraikitra izay nihantsy ny herisetra tamin'i Hattar tao amin'ny media sosialy, ny fianakavian'i Hattar. Tamin'izany, namoaka fibahanana amin'ny fanehoana amin'ny media  ny raharahan'i Hattar sy ny famonoana azy ireo manampahefana Jordaniana.
Miakatra fitsaràna ankehitriny ireo Sodane enina mpikatroka mafana fo mpikambana ao amin'ny Ivon-toerana Khartoum ho an'ny Fampiofanana sy Fampivoarana ny Maha Olona, noho ny fanohintohinana ny rafitry ny lalàm-panorenana, fihantsiana ady amin'ny fanjakana, fitsikilovana, ary fampihorohoroana. Raha voaheloka izy ireo, mety ho voasazy  an-tranomaizina mandrapahafatiny, na voaheloka ho faty. Ho porofon'ilay nolazaina ho “fijangajangan'izy ireo”, nampiasa ireo sary sy lahatsary notsoahana tao amin'ireo solosaina manokan'ireo mpikatroka izay nalaina tamin'izy ireo, ireo Sodane mpampanoa lalàna. Ohatra anatin'ny maro ity sary nalefa tamin'ny Twiter eto ambany ity, naseho ho porofo fa manana “sary mamoafady” ao anatin'ny solosainy ireo mpikatroka mafana fo.
Sary mamoafady nampiasaina ho porofo hiampangàna an'i @midhatafifi  tamin'ny fitsaràna ny 4/9, ahitàna ahy sy ny vadiko
50% latsaka raha oharina  amin'ireo lehilahy no fampiasàn'ireo vehivavy ny aterineto any amin'ny faritr'ireo firenena an-dalam-pandrosoana, hoy ny Fikambanana mpanao asa soa World Wide Web. Nanao tatitra an-tsarintany mampiseho ireo fivoarana mba hamenoana ny elanelana misy eo amin'ny vavy sy lahy, ao amin'ireo firenena 10 ilay Fikambanana, tafiditra amin'izany i Kolombia, Ejipta, Ganà, India, Indonezia, Mozambika, Nizeria, Filipina, ary Ogandà. Asehon'ilay tatitra fa raha toa ka efa kely sisa ny elanelana any amin'ireo faritra andrenivohitra ao India sy Filipina, mbola lavitra ny làlana aleha — ary mbola sarotra ihany koa ny ahazoana ireo angon-drakitra mikasika ny fampiasan'ny vavy sy lahy ny Aterineto, hany ka mahasarotra ny fandrefesana ny fivoarana rehefa miseho izany. Araka ilay tatitra, ny tsy fahafahana ara-bola, ny tsy fahaizana mampiasa Aterineto ary ny herisetra ao amin'ny Aterineto no antony manakana ireo vehivavy tsy hiditra amin'ny Aterineto.
Namana, Mpanaraka, Tomponandraikitry ny Polisy, ary Fahavalo: Fanarahamaso ny Fiarahamonina any Thailand [Eng]  – Privacy International
Aterineto ao Kiobà: Toerana lehibebe kokoa ho an'ny tsikera saingy mivoatra ny famerana miadana ny fahalalahan'ny fanaovana gazety [Eng]  – Committee to Protect Journalists
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui , Renata Avila , Ellery Roberts Biddle , Pauline Ratze  ary Sarah Myers West .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/01/89488/
 lalàna vaovao: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/switzerland-votes-in-favour-of-greater-surveillance
 hitsikilo amin'ireo fifandraisan-davitra: http://arstechnica.co.uk/tech-policy/2016/09/switzerland-votes-for-meatier-surveillance-law-by-large-margin/
 Naneho ahiahy: http://www.swissinfo.ch/directdemocracy/september-25-vote_secret-service-reform-pitches-security-vs-privacy/42305540?&linkType=guid&ns_mchannel=rss&srg_evsource=rss
 tafatafa niaraka tamin'ny TechCrunch: https://techcrunch.com/2016/09/26/swiss-public-back-law-expanding-surveillance-powers/
 ny orinasa dia tsy manangona na mitahiry : https://protonmail.com/security-details
 lehiben'ny fampanoavana: http://www.gob.mx/pgr
 lisitra mitombo hatrany amin'ny fanjifàna goavana: https://advox.globalvoices.org/2016/09/29/mexicos-attorney-general-secretly-purchased-costly-spyware-again/
 antsoina hoe mpisambotra IMSI: http://www.proceso.com.mx/449165/finlandia-mexico-le-compra-equipo-espiar-en-celulares
 Notifirina ho faty: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/jordanian-writer-shot-dead-trial-insulting-islam-nahed-hattar
 fibahanana amin'ny fanehoana amin'ny media: https://advox.globalvoices.org/2016/09/26/jordanian-authorities-impose-media-gag-after-writers-killing/
 mety ho voasazy: https://freedomhouse.org/article/sudan-activists-charged-death-penalty-crimes
 Nanala : http://gulfbusiness.com/case-dropped-dubai-resident-detained-illegally-promoting-charity/
 50% latsaka raha oharina: http://webfoundation.org/2016/09/five-barriers-to-womens-online-empowerment-new-digital-gender-audit-released/
 Namana, Mpanaraka, Tomponandraikitry ny Polisy, ary Fahavalo: Fanarahamaso ny Fiarahamonina any Thailand [Eng]: https://www.privacyinternational.org/node/935
 Aterineto ao Kiobà: Toerana lehibebe kokoa ho an'ny tsikera saingy mivoatra ny famerana miadana ny fahalalahan'ny fanaovana gazety [Eng]: https://cpj.org/reports/2016/09/connecting-cuba-internet-bloggers-press-freedom-criticism.php
 Misorata anarana amin'ny Netizen Report: http://eepurl.com/Y-f11